नेपाल र विदेशमा ‘कबड्डी ४’ रिलिज « Online Tv Nepal
Published : 27 May, 2022 1:02 pm
रामबाबु गुरुङ निर्देशित ‘कबड्डी ४’ शुक्रबारबाट नेपाल लगायत दर्जन बढी मुलुकमा रिलिज भएको छ । ‘कबड्डी’को चौथो श्रृंखला नेपालका झण्डै डेढ सय पर्दामा रिलिज भएको छ भने बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड र केही युरोपेली मुलुकमा पनि प्रदर्शनमा आएको छ । भारत, जापान र अन्य मुलुकमा भने आगामी सातादेखि प्रदर्शनको तयारी छ ।
‘कबड्डी’का अघिल्ला तीनै श्रृंखलाले नेपालसहित डायस्पोरामा उत्कृष्ट कमाइ गरेका छन् । चौथो श्रृंखलाले त नेपाली बक्स अफिसमा व्यावसायिक कीर्तिमान राख्ने अनुमान छ ।दयाहाङ राई, सौगात मल्ल र मिरुना मगरको मुख्य भूमिका रहेको ‘कबड्डी ४ : द फाइनल म्याच’ मुख्य पात्र काजी (दयाहाङ राई)को विवाह वरपर घुम्छ । फिल्ममा काजीको बिहे हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कौतुहलता दर्शकमाझ छ ।
मैंयाबाट धोका पाएको काजीलाई बिहे गर्न रुचि छैन । तर उसको बाउलाई वंश जोगाउने चिन्ता छ । यस्तो परिस्थितिमा गाउँकी नयाँ शिक्षिका शान्ति (मिरुना)को प्रवेश हुन्छ । काजीलाई मन पराउने शान्तिको प्रेममा बमकाजी (सौगात) पागल छ ।यस्तोमा शान्तिको बिहे काजी वा बमकाजीमध्ये कोसँग हुन्छ ? काजीको बिहे हुन्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर नै द फाइनल म्याच हो । यो श्रृंखलालाई लिएर विश्वभरका नेपालीभाषी दर्शकमाझ व्यापक पर्खाइ रहेको थियो ।